CAICT: တရုတ်၏ 5G စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၆၃. ၅% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂ ၆၆ သန်း အထိရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Categories: Smartphones ကိုPandaily ဇန်နဝါရီ 14, 2022 ဇန်နဝါရီ 14, 2022 မှာ Posted
ရဲ့တရုတ် သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အကယ်ဒမီတရုတ် ရဲ့ 5G စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှုဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ကနေ ဒီဇင်ဘာ လအထိ အလုံး ရေ ၂ ၆၆ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၃. ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုး လာကာ အလားတူ ကာလမှာ စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှု ရဲ့ ၇၅. ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကာ ကမ္ဘာ့ ပျမ်းမျှ ၄၀. ၇ ရာခိုင်နှုန်း ထက် အများကြီး ပိုများ နေတယ်လို့ အစိုးရ အကြံပေး အဖွဲ့က သောကြာနေ့က ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှု သိသိသာသာ တိုးတက် လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ် နိုင်ငံသည် ကွန်ယက် လွှမ်းခြုံ မှုနှင့် terminal စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး 5G အသုံးပြုသူ အရေအတွက် တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ လကုန် အထိ အချက်အလက်များအရ အဓိက ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ သုံး ခု၏ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူ ဦး ရေသည် ၁. ၆၄ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ၄ ၉၇ သန်း မှာ 5G မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း ဆိပ်ကမ်း များ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ကုန်ဆုံး ချိန် ထက် ၂ ၉၈ သန်း တိုးလာခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ လကုန် ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် 5G စမတ်ဖုန်း ဆိပ်ကမ်း ၄ ၉၁ ခု၊ ကြိုးမဲ့ ဒေတာ ဆိပ်ကမ်း ၁ ၆၁ ခုနှင့် မော်တော်ယာဉ် ကြိုးမဲ့ ဆိပ်ကမ်း ၁၉ ခုအပါအ ၀ င် စုစုပေါင်း 5G ဆိပ်ကမ်း ၆ ၇၁ ခုကို လိုင်စင် ချ ထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန သည်အခြား ၀ န်ကြီးဌာန ၉ ခုနှင့် တွဲဖက်၍ 5G လျှောက်လွှာ “ ရွက်လွှင့် ခြင်း” လုပ်ငန်း စီမံချက် (၂၀၂၁-၂၀ ၂၃) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လာမည့် သုံး နှစ်အတွင်း 5G လျှောက်လွှာ များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ထားသည်။
စာရင်းအင်း များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ လကုန် ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်နှင့် မြို့ကြီး များသည် 5G နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု ရန် မူဝါဒ စာရွက်စာတမ်း ၅ ၈၃ ခုကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး ၇ ၀၊ စည်ပင်သာယာ အဆင့်တွင် ၂ ၆၄ ခုနှင့် ခရိုင် နှင့် ခရိုင် အဆင့်တွင် ၂ ၄၉ ခုရှိသည်။ ဤ မူဝါဒ များသည် 5G နည်းပညာ ကိုစုပ်ယူ နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာ လကုန် အထိ တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ 5G အခြေစိုက်စခန်း ၁. ၃ ၉၆ သန်း ကိုတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည် အတွင်းရှိ စီရင်စု အဆင့် အထက် ရှိ မြို့ များအားလုံးကို လွှမ်းခြုံ နိုင်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်၏ ၉၇% ကျော်နှင့် မြို့နယ် များ၏ ၅၀% ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ နိုင်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များသည် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၈၀၀, ၀၀၀ ကျော်ကို တည်ဆောက်ပြီး မျှဝေ ခဲ့ပြီး 5G ကွန်ယက် များ ၏ထိရောက်မှုကို မြှင့် တင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi စမတ်ဖုန်း များတွင် ဆင်ဆာ စနစ် ပါရှိ သည်ဟူသော ဂျာမန် ဆိုက် ဘာ လုံခြုံရေး အစီရင်ခံစာ ငြင်းဆို
5G စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် virtual private network တည်ဆောက် ခြင်းသည် ထူးခြားသော ရလဒ် များရရှိခဲ့သည်။ 5G စက်မှုလုပ်ငန်း virtual ပုဂ္ဂလိက ကွန်ယက် သည် စက်မှု လုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတူးဖော် ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင် ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဆေးဝါး ကုသမှု စသည့် ဒေါင်လိုက် စက်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု ကိုပိုမိုကောင်းမွန် စေရန်နှင့် အသွင်ပြောင်း ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့် ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် 5G နည်းပညာ ကိုအပြည့်အဝ အသုံးပြု ရန်လိုအပ်သော ကွန်ယက် အခြေအနေများ ကိုပေးသည်။ ယခုအချိန်အထိ တရုတ်နိုင်ငံတွင် 5G စက်မှုလုပ်ငန်း virtual ပုဂ္ဂလိက ကွန်ယက် ပေါင်း ၂ ၃၀၀ ကျော်ကို တည်ဆောက်ပြီး စီးပွားဖြစ် ရောင်းချခဲ့သည်။
ကိုPandaily Jan7Jan 8 မှာ Posted
ကိုPandaily Jan5Jan7မှာ Posted